कसरी iCloud मा जगेडा गर्न अनुप्रयोगहरू चयन गर्न आईफोन समाचार
म्यानुअल तरीकाले कुन अनुप्रयोगहरू iCloud मा जगेडा गर्न सकिन्छ चयन गर्न
यदि तपाईंले प्रयोग गर्न छनौट गर्नुभयो भने iCloud तपाइँको आईओएस उपकरणको जगेडा गर्न उनीहरूको प्रारम्भिक सेटअपको बखत, त्यस पछि तपाईंले स्थापना गर्नुहुने धेरै जसो अनुप्रयोगहरूको आईकक्लाडमा स्वचालित रूपमा तिनीहरूको ब्याकअप सेटिंग्स हुनेछ। यो तपाईको आईफोन वा आईप्याडलाई ब्याकअपबाट पुनःस्थापना गर्ने मामिलामा धेरै उपयोगी हुन सक्छ, किनकि तपाईले सबै अनुप्रयोग प्राथमिकताहरू फेरी कन्फिगर गर्नुपर्दैन।
तर के हुन्छ यदि तपाईं केहि अनुप्रयोगहरू iCloud मा जगेडा गर्न चाहनुहुन्न भने? फलस्वरूप, आईक्लाउडमा जगेडा गर्न निश्चित अनुप्रयोगहरू समावेश नगरी यो एकदम सजिलो छ। हामी तपाईंलाई कसरी तल देखाउँनेछौं।
म धेरै कारणहरूको बारेमा सोच्न सक्छ किन तपाईं केही अनुप्रयोगहरूबाट डाटा ब्याक अप गर्न चाहनुहुन्न। सुरक्षा ती मध्ये एक वा हो भण्डारण ठाउँ बचत गर्दै सायद अझ स्पष्ट कारण हुन सक्छ। त्यसैले आईक्लाउड ब्याकअपमा जाने अनुप्रयोगहरूको अनुगमनले तपाईंलाई प्रयोग गर्न सक्ने भण्डारण ठाउँको मात्रामा बढी नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ, र यदि तपाईं GB जीबी नि: शुल्क योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने भण्डारण गणनामा प्रत्येक एमबी प्रयोग हुन्छ।
कसरी iCloud मा प्रतिलिपि गर्न सकिन्छ कि अनुप्रयोगहरू चयन गर्न।
चरण १: तपाईको आईफोन, आईप्याड वा आइपड मा जानुहोस् सेटिंग्स> आईक्लाउड> भण्डारण> भण्डारण प्रबन्ध गर्नुहोस्.
चरण २: यदि तपाइँ तपाइँको एप्पल खातामा लिंक भएका धेरै आईओएस उपकरणहरू छन् भने, तपाइँ तिनीहरू सबैको लागि ब्याकअपको साथ उपकरणहरूको साथ प्रस्तुत गरिने छ। तपाईंले प्रयोग गरिरहनु भएको उपकरणका लागि ब्याकअप चयन गर्नुहोस् हाल।
चरण:: अब तपाई आफ्नो उपकरणको जगेडा जानकारी देख्नुहुनेछ। अन्य विवरणहरूको माझमा, तपाईले देख्नुहुनेछ अन्तिम ब्याकअप गरिएको थियो र यसको आकार। सुरु गर्न, अनुप्रयोगहरू देखाइनेछ, ट्याप गर्नुहोस् “सबै अनुप्रयोगहरू देखाउनुहोस्"स्क्रीनको तल।
चरण:: त्यहाँबाट तपाई सुरू गर्न सक्नुहुनेछ असक्षम अनुप्रयोगहरू जुन तपाईं जगेडा गर्न चाहनुहुन्न आईक्लाउडमा। एकचोटि तपाईले अनुप्रयोगहरूको लागि ब्याकअप असक्षम गर्नुभए पछि तपाईलाई यो निश्चित गर्न भनिन्छ कि तपाई साँच्चै ब्याकअप असक्षम पार्न चाहानुहुन्छ र हाल आईक्लाउडमा रहेको डाटा मेटाउन चाहानुहुन्छ।
कृपया नोट गर्नुहोस् अनुप्रयोग प्रयोग भण्डारण द्वारा क्रमबद्ध गरिएको छ, तिनीहरूसँग जुन शीर्षमा सबै भन्दा बढि भण्डारण प्रयोग गर्दछ। आईओएस ले पनि देखाउँदछ कि प्रत्येक अनुप्रयोगले कति डाटाको ब्याक अप गरिरहेको छ, जसले तपाईंलाई कति ठाउँ बचत गर्न सक्दछ भन्ने राम्रो विचार दिन्छ।
सामान्यतया, फोटो पुस्तकालय अनुप्रयोगहरू मध्ये एक हो जुन अधिक भण्डारण प्रयोग गर्दछ। तपाईंको फोटो लाइब्रेरी बैकअप असक्षम पार्नु भनेको एक टन आईक्लाउड भण्डारण ठाउँ पुनः दावी गर्न सजिलो तरिका हो, तर यदि तपाईं त्यसो गर्नुहुन्छ भने, तपाईंको फोटोहरूलाई कहिँ पनि ब्याक अप गर्न सम्झनुहोस्, या त भण्डारण सेवामा। विभिन्न क्लाउड भण्डारण, वा हुनसक्छ स्थानीय रूपमा तपाईंको कम्प्युटरमा।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » एप्पल उत्पादनहरू » iCloud » म्यानुअल तरीकाले कुन अनुप्रयोगहरू iCloud मा जगेडा गर्न सकिन्छ चयन गर्न
एक मानिस एक एप्पल स्टोर भित्र तरवार लिएर हिंडे